Ukwenza izimbali ngephepha - umsebenzi kuyajabulisa, ezithakazelisayo futhi engavamile. Ngosizo lezi yezandla ungakha izingoma abatelekile kanye, ezibonisa umcabango, ukuhlobisa indlu yakho, ekuthuthukiseni elingaphakathi okwenza kube ethokomele kakhulu nenhle. Izimbali zingenza okuhlukile, siphinde sibheke indlela yokwenza rose aphume iphepha.
Ngaphambi kokwenza lo msebenzi ojabulisayo, kudingeka alungiselele amathuluzi. Phakathi kwabo: isikele, ipensela, iphepha ezinemibala noma iphepha elimhlophe ne ezihlukahlukene Amadivayisi ukuze umbala (kusuka amapensela fafaza upende, edayiswa art izitolo ezikhethekile). Awu, manje usukulungele ukwenza ezandleni wethu wazalwa wavuka ephepheni.
Into yokuqala okudingeka ukuba unqume ukuthi yini izimbali umbala ufuna ukudala. Konke kuncike ukunambitheka yakho, kodwa kule mini-sifundo, sizobheka ukuthi ukwenza obomvu wavuka ephepheni. yokukhiqiza uhlelo ulula, kodwa umphumela uba umxhwele ngempela nge ubuhle bayo!
Njengoba seniye lunqunywe umbala, ungathola ukusebenza. Thatha iphepha ezinemibala bese usika isikwele yokulinganisa mayelana 12 12 amasentimitha. Nokho, ohlangothini lwakhe incike ubukhulu izimbali sifuna ukuthola. Kukhula ihlumela, aba maningi uhlangothi umbala yethu sikwele. Sika? Kulungile. Manje chaza maphakathi isikwele. Lokhu kungenziwa ngokukhumula iso. Beka iphuzu isikhungo kanye ukuqalisa ukudweba Kuvunguza. Akunjalo ngempela wokuthi uyisicaba. Nokho, kukhona caveat. Isikhala phakathi kwemigqa, okuyizinto eduze isikhungo, kufanele kube ukuba likhudlwana kune-phakathi nalezo basondela emaphethelweni. Ngokwesibonelo, uma iseduze maphakathi mayelana 16-18 mm, ibanga phakathi "imigqa abekelwe emaceleni" kufanele kube 12-14 mm. Kuvunguza kufanele kukhokhelwe ipensela, abangekho wentshiseko lapho ngokucindezela: yokuthi ke emgqeni ngeke bheka nice kakhulu, futhi wazesula ngephepha ezinemibala ngeke isebenze - kusele imishwe emhlophe futhi izindawo. Nokho, uma ngephepha ecwebezelayo ke ungazama.
Nokho, ngesineke Kuvunguza? Fine. Manje siqala uyalusika, yebo, kusukela ngaphandle. I amakhona isikwele, kufanele anqunywe, ukuthola iphepha round Kuvunguza.
Ngakho, yini okufanele uyenze ngokulandelayo? Ukwenza kube sekupheleni ikhoyili futhi ngobumnene uqale Roll strip iphepha libe tube. Akufanele kube obukhulu kakhulu. Awubheke lezi rose. Qualitatively ezenziwe iphepha rose cishe lutho hhayi zihluke kubo. Ncika umuzwa wakho Ingxenye, uzizwe sengathi ukhishwa mculi. Phakathi amacembe kukhona ezinye isikhala ukuthi kudingeka sikubonise, ekwenzeni iphepha izimbali.
Lapho iphepha ukuhlubula phezu, futhi isikhala ezisele ukuze ugoqe rose yethu, yi evikelekile nge glue (kungakuhle ukuthi kwaba glue-iphuzu). Ungeqisi it! A semali glue ngokushesha Ubamba iso.
Nokho, rose kwethu iphepha ngomumo! Ngokuqinisekile awufuni imbali, ngakho-ke, uphinda izinyathelo okufanayo nangezinye ezicucwini zamaphepha. Bangakwazi enamathiselwe Amahlumela ophilayo, okuzokwenza sihle kunoma iyiphi vase enhle.
Yiba zokudala, futhi ukuphila kwakho nakanjani kwanda!
Isihloko lomuthi njengesigxobo geoglyph ezihlukahlukene
Operating System Yosemite OS X. Kanjani I ufake kwikhompyutha yami?